आज कुवेती दिनारसहित केही देशको भाउ बढ्यो, कुन देशको कति ? – " सुलभ खबर "
आज कुवेती दिनारसहित केही देशको भाउ बढ्यो, कुन देशको कति ?
काठमाडौं । आज (मंगलबार) कुवेती दिनारसहित प्राय देशको भाउ उकालो लागेको छ भने केहीको सामान्य ओरालो लागेको छ ।आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११३ रुपैयाँ ५३ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ११४ रुपैयाँ १३ पैसा रहेको छ।
त्यस्तै युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १४७ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रिदर १४८ रुपैयाँ १३ पैसा रहेको छ। साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ २७ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ४३ पैसा रहेको छ। त्यस्तै कतारी रियाल एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ १८ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ३५ पैसा रहेको छ।
युएई दिराम एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ९१ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ७ पैसा रहेको छ। मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ १५ पैसा तथा बिक्रिदर २७ रुपैयाँ २९ पैसा रहेको छ।
त्यस्तै कुवेती दिनार एकको खरिददर ३ सय ७४ रुपैयाँ ३८ पैसा तथा बिक्रिदर ३ सय ७६ रुपैयाँ ३६ पैसा रहेको छ। बहराईन दिनार एकको खरिददर एकको खरिददर ३ सय एक रुपैयाँ ११ पैसा तथा बिक्रिदर ३ सय २ रुपैयाँ ७० पैसा रहेको छ।